We Fight We Win. -- " More than Media ": တိုင်းရင်းသား လူငယ်များကို ခွဲခြား ဆက်ဆံနေမှု ရပ်ဆိုင်းပြစ်ရေး လှုပ်ရှားမှု
တိုင်းရင်းသား လူငယ်များကို ခွဲခြား ဆက်ဆံနေမှု ရပ်ဆိုင်းပြစ်ရေး လှုပ်ရှားမှု
မန္တလေး တိုင်းရင်းသား ဒီဂရီကောလိပ်တွင် ပြန်လည်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်
တိုင်းရင်းသားလူငယ်ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြ လျက်ရှိနေပါတယ်။ ကျောင်းအ၀ လမ်းမပေါ်တွင်
် အိပ်နေကြပြီး ဆရာမ များကလည်း စောင့်ဆိုင်း အားပေးနေကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက
Ethnic students protest the government to get their rights for admission in Ethnic University in Mandalay, upper Burma, where they want to study. Authority kick out ethnic student to new school in remote area, where is no facilities, no transport and no internet communication. Traditionally, Burmese government practices discrimination against the ethnic minority since A.D 1044. There is no ethnic minister in high position in army and policy-making position in government since 1962.